နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုတို့၏ နှစ်ပတ်လည် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် | Myanmar President Office
Submitted by cwmpo4 on Sat, 10/13/2018 - 09:55
နေပြည်တော် - အောက်တိုဘာ ၁၂
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်း၌ ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် ဒေသစံတော်ချိန် ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် ဘာလီကျွန်း Bali Nusa Dua Convention Centre ၌ ကျင်းပသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စု တို့၏နှစ်ပတ်လည်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ အထူးဂုဏ်ထူးဆောင် ဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ဂျိုကိုဝီဒိုဒိုသည် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ဆမ်ဒက်ဟွန်ဆန်၊ လာအိုဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ထောင်လွန်းဆီဆုလစ်၊ ဗီယက်နမ် ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ငုယင်စွမ်းဖု၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြား ရေးမှူး Mdm. Christine Lagarde၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ Dr. Jim Yong Kim၊ နိုင်ငံ တကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ စုပေါင်း မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ဂျိုကိုဝီဒိုဒိုက မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ၊ အကြီးအကဲများ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများ၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပြီးတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဘာလီကျွန်းရှိ Garuda Wisnu Kencana ယဉ်ကျေးမှုဥယျာဉ်သို့ ရောက်ရှိကြပြီး Garuda Wisnu Kencana ရုပ်ထုတည်ဆောက်ထားမှုကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် Garuda Wisnu Kencana ယဉ်ကျေးမှု ဥယျာဉ်ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်း၌ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ အမှတ် တရ ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ View Point သို့ရောက်ရှိပြီး ဘာလီကျွန်း၏ သဘာဝရှုခင်းများကို ကြည့်ရှုလေ့လာသည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အထူးလေယာဉ်ဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာရာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Thomas Trikasih Lembong၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်အိအိခင်ဧ၊ အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းလွင်၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သံတမန်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိကြီး များနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ဘာလီမြို့ Ngurah Rai အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ည ၇ နာရီတွင် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြရာ ဒုတိယသမ္မတများဖြစ်ကြသည့် ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ၊ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မျိုးအောင်၊ နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်မော်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမင်းသူ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းနောင်၊ မြန်မာ နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ် ဒုတိယရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်ဝင်းဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Prof. Dr.Iza Fadri နှင့် ဇနီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြ သည်။